नेपालमा उफ्रने माकुराका नौ नयाँ प्रजाति फेला « Pariwartan Khabar
नेपालमा उफ्रने माकुराका नौ नयाँ प्रजाति फेला
7 September, 2020 7:50 am
नेपालमा नौ प्रजातिका उफ्रने माकुरा फेला परेका छन् । यसअघि रेकर्डमा नरहेका नौ प्रजातिका नयाँ माकुरा फेला पारिएको अध्यता किरण थापा मगरले जानकारी दिए ।
उनले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक वर्ष लगाएर गरेको खोजमा उफ्रने प्रजातिका माकुरा पत्ता लगाएका हुन् । अध्ययनका लागि उनलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्रमुख बाबुराम लामिछाने, अन्य संरक्षणकर्मी विमलराज श्रेष्ठ, टेकबहादुर गुरुङ, रबिनबहादुर केसी, डेभिड इ।हिल र अर्जुन थापाले सघाएका थिए । यी माकुरालाई ‘जम्पिङ स्पाइडर’ भनेर विश्वव्यापी रूपमा चिनिन्छ । साल्टिसिडा वैज्ञानिक नाम र यसै परिवारभित्र पर्ने यो माकुरा एरेनाइ वर्गमा पर्छ । नयाँ फेला परेका नौ प्रजातिका माकुरा मध्येको पहिलो प्रजाति एसेमोनिया टिनियुपस हो । यो जङ्गलभित्र रहने गर्छ ।
गत अगस्ट २९ मा सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार दोस्रोको नाम क्रिसिला भोलुप रहेको छ । यो माकुरा नेपालसहित भारत, भुटान र श्रीलङ्कामा पाइएको छ । तेस्रोमा रहेको इपोसिला औरान्टिका माकुरा नेपालसहित भारत, मलास्का, मलेसिया, म्यानमार, श्रीलङ्का र भियतनाममा पाइएको छ । चौथोमा रहेको हाइलस सेमी कपरियस नामको माकुरा नेपालसहित भारत र श्रीलङ्कामा मात्र पाइएको छ । पाँचौँ नम्बरमा रहेको आइसियस अल्बोटरमिनस नामकोे माकुरा नेपाल र भारतमा मात्र पाइएको छ ।
छैटौँ नम्बरमा रहेको फिन्टेला भिटाटा नामको माकुरा नेपालसहित बोर्नियो, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स र भियतनाममा पाइएको छ । सातौँ नम्बरमा रहेको सिलर कर्परस नामको माकुरा नेपालसहित चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया र ताइवानमा पाइएको छ । आठौँ नम्बरमा रहेको टेलामोनिया डिमिडियाटा नामको माकुरा नेपालसहित भारत, भुटान, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, सिङ्गापुर र सुमात्रा टापुमा पाइएको छ ।
नवौँ नम्बरमा रहेको टेलामोनिया फेस्टिभा नामको माकुरा नेपालसहित चीन, भारत, इन्डोनेसिया, जाभा, मलेसिया, म्यानमार, सिङ्गापुर, सुलावासी र भियतनाममा पाइएको छ । आम रूपमा देखिने माकुराभन्दा फरक बेहोरा भएका यी प्रजातिका माकुरा पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीको साना चर मध्येका हुन् । आम माकुरा रुख, जङ्गल, घर तथा अन्यत्र उसको -यालबाट धागो निकालेर जालो बनाउँदै बस्न मन पराउँछन् । त्यही धागोको सहायताले शिकार गर्ने र एक स्थानबाट अर्को स्थानमा विचरण गर्ने गर्छन् तर उफ्रने प्रजातिका माकुराले त्यसो गर्दैन । यिनीहरूले न -यालबाट धागो नै कात्छन् । न त जालोमा आफ्नो घर बनाउँछन् ।
अध्यता मगरका अनुसार उफ्रँदै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुगेर आफूभन्दा साना किटपतङ्गको शिकार गरेर मानिसको कृषिबालीलाई पनि जोगाउने गर्छ ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
कोरोना उपचारमा चलाइएका औषधि ‘प्रभावहीन’
भोकमरीको सूचीमा नेपाल ७३औं स्थानमा
सुरक्षित भएर किनमेलमा निस्कन आग्रह
टीकामा भौतिक दूरी कायम गर्न अनुरोध
४८ विभागको जिम्मा पाएपछि पोखरेल दंग, पूर्व माओवादी रुष्ट
सलोन र स्मिताको ‘मायाले मलाई बोलायो’ रिलिज (भिडियो सहित)
कैदीलाई सांसदको खसी उपहार
रानीपोखरीको उद्घाटन कात्तिक ५ मा
डा. राजन भट्टराईद्वारा आफ्नो पहलमा निर्माणाधीन बूढानीलकण्ठका विभिन्न परियोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन
उपत्यकाका १ हजार ६९८ सहित थप २ हजार ९४२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
चाडपर्व मनाउँदा सिङ्गो पार्टी पंक्ति र जनताको बिचमा गई कोभिड १९ को बारेमा सचेत गराउन अध्यक्ष दाहालको निर्देशन
कालापानी–लिम्पियाधुरा विवाद : नेपालले जुटायो ऐतिहासिक प्रमाण
शुक्र ग्रहमा जीवन भएको संकेत
विश्वलाई अर्को महामारीका लागि तयार रहन डब्लुएचओको चेतावनी
ठाडी भाका कि ठारी भाखा ?
युवा व्यवसायी लामिछानेको लोभलाग्दो व्यवसाय, काटेर खान तयार पारिएका पाडा पालेर लाखौँ कमाई
अध्यक्ष : ध्रुवप्रसाद घिमिरे
सम्पादक : पदम बहादुर पुन
बु.न.पा.-११, पो.ब.नं.: ५०८, कपन काठमाण्डौ
सूचना विभाग द.न.: ३५६/०७३/०७४
©2020 Pariwartan Khabar
Designed by prawidhi.com